Albert Uderzo, mpamorona ny Asterix sy Obélix, dia mamela antsika amin'ny faha-92 | Famoronana an-tserasera
Andro mampalahelo ho an'ny tontolon'ny sary an-tsary sy sary miaraka aminy fahafatesan'i Albert Uderzo, ilay mpamorona an'i Asterix sy Obélix ary nandao antsika tamin'ny faha-92 taonany. Maty tsy misy ifandraisany amin'ny coronavirus sy ny aretim-po izy.
I Uderzo no nanome ny fiainana voalohany Asterix rehefa navoaka tamin'ny 1959 tao amin'ny magazine Pilote, na dia tsy nipoitra aza ny rakikira voalohany "Asterix the Gaul" roa taona taty aoriana niaraka tamin'ny kopia 6.000.
Asterix sy Obelix no tantara an-tsary be mpandika teny indrindra eto an-tany amin'ny fiteny 111 sy fitenim-paritra Namidiny 335 tapitrisa kopia manerantany. Toetra roa mampiavaka ny kolontsaina pop ary efa am-polony taona maro izay no anisan'ny niainany niainantsika niaraka tamin'izy ireo sy ny fomba nankafizinay rehefa natolotr'izy ireo ny Romanina.
Ny mpanoratra anao Nodimandry i Goscinny tamin'ny 1977, saingy nanohy ny andiany i Uderzo hatramin'ny taona 2010 dia navoaka farany. Asterix dia nandeha tamin'ny boky tantara an-tsary ka hatramin'ny sary mihetsika toy ny The andrana roa ambin'ny folo fitsapana an'i Asterix na ireo izay efa nentina tany amin'ny sinema niaraka tamin'i Asterix: misiona Cleopatra; tontolon'ny sary mihetsika eo an-tananao miaraka amin'i ToonBoom raha mangataka fitsarana maimaimpoana ny sekolinao.
Uderzó dia nanomboka ny asany tamin'ny SPE, trano famoahana any Paris izay nahalalany ny fototr'ilay sary sy ny nihaonany tamin'i Edmond Calvo, mpampianatra azy. Tamin'ny taona 1951 dia nihaona i Uderzo sy Goscinny ary nanome ny roa amin'ireo olo-malaza malaza indrindra amin'ny kolotsaina pop.
Tsy vitan'ny hoe nanome lalana ireo mpilalao roa be mpitia indrindra izy ireo, fa nanana an'i Panoramix sy ilay tanàna Gaul tsy azo ovaina niaraka taminay koa izahay nandritra ny fotoana nahafinaritra sy nahafinaritra indrindra. Andro mampalahelo ho an'ny tontolon'ny sary rehefa lasa ny iray amin'ireo lehibe toa an'i Uderzo ary avy eto dia tsy ho azontsika ny tantaran'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Nodimandry i Albert Uderzo, mpamorona ny Asterix ary nanome antsika fotoana be dia be niaraka tamin'i Obélix
Ny Thyssen Museum dia manolotra ny làlana an-tserasera: "Jiro sy loko amin'ny hosodoko. Ny angano an'i Venise"
ToonBoom dia manome ny vahaolana mitarika azy eo amin'ny sehatry ny sarimiaina maimaim-poana any an-tsekoly sy ivon-toeram-pampianarana